जीवनशैली Archives - LibjuBhumju
वाम्बुले राईको मौलिक परिकार पाइने चासुवा रेष्टुरेन्ट सातदोबाटोमा
December 14, 2020 December 14, 2020 LBAuth52LeaveaComment on वाम्बुले राईको मौलिक परिकार पाइने चासुवा रेष्टुरेन्ट सातदोबाटोमा
काठमाडौं : किरात वाम्बुले राईको मौलिक परिकार पाइने चासुवा रेष्टुरेन्ट सातदोबाटोमा खुलेको छ। राष्ट्रगानका रचनाकार व्याकुल माइला(प्रदीपकुमार) राईले बिहीबार यसको उद्‍घाटन गरेका हुन्। उद्‍घाटनपछि माइलाले यस रेष्टुरेण्टमा किरात वाम्बुले राईको जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने चि(जिर्मा) चासुवा रेष्टुरेन्टमा खान पाइने बताए। उनले भने,‘चासुवा रेष्टुरेन्टले पितापुर्खाले गाउँठाउँमा प्रयोग गर्दै आएका परिकारहरु प्रवर्द्धन गर्न लागेको छ। यहाँ विशेषगरी चि (जिर्मा)लाई प्रवर्दन गरिएको […]
पूर्वराजदूत प्रा.डा. नोवल किशोर राईको लकडाउन डायरी
September 15, 2020 LB56LeaveaComment on पूर्वराजदूत प्रा.डा. नोवल किशोर राईको लकडाउन डायरी
प्रा.डा. नोवल किशोर राई कोरोना भाइरसले विश्वलाई गाँजेको बेला हामी भाग्ने ठाउँ छैन । नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि घरभित्रै सीमित हुनु परेको छ । म ललितपुरको धोबिघाटस्थित घरमै छु । सुरुको केही दिन त धेरै उकुसमुकुस भइयो । सातौं दिनसम्म आइपुग्दा तालिकावद्ध हुन सिकेको छु । उमेरले ७४ वर्ष पुगेको छु । श्रीमतीको साथमा […]
September 15, 2020 LB73LeaveaComment on सम्झनामा मेरो पापा “रानाज्यु” – गगन राई
संस्मरण म सम्झिरहेछु ,२०७५ साल फागुन महिनाको १७ गतेको त्यो दिन । जुन दिन बिहानको ४ः०० वजे म काम गर्ने विद्यालयको मेरो प्रधानाध्यापकले मलाई निद्राबाट उठाएर अप्रत्यक्ष रुपमा मेरो बुवाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको थियो । मेरो प्रधानाध्यापकले दिनुभएको अप्रत्यक्ष जानकारी मैले देखेको सपनासँग मिलेको थियो । उता मेरो बुवा मृत्युसँग लडिरहँदा यता मैले […]
१०० वर्ष टेकेपछि राष्ट्रकवि माधव घिमिरे
September 15, 2020 LB52LeaveaComment on १०० वर्ष टेकेपछि राष्ट्रकवि माधव घिमिरे
गणेश वाम्बुले राई काठमाडौं– कर्मले आयु महान् बनाउँछ । त्यही आयु लिएर १०० वर्ष टेक्नु भएको छ– राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे । शतायु पाउनु आम मानिसका निम्ति आफैंमा अनौठो हो । राष्ट्रभाषाको श्रीवृद्धिमा आजीवन सुम्पिने व्यक्तित्वले त्यो आयु पाउनु नेपालीकै निम्ति गौरवको विषय हो । माधवप्रसाद घिमिरेको जन्म वि.सं.१९७६ असोज ७ गते लमजुङ जिल्लाको पुस्तुन गाउँमा […]
जीवनले ठेलाबाट कमाउँछन मासिक ४० हजार
September 15, 2020 LB51LeaveaComment on जीवनले ठेलाबाट कमाउँछन मासिक ४० हजार
श्याम राई काठमाडौं दाई ४ वटा सेबाले बनाई दिनुस न.. हुन्छ बस्दै गर म बनाईदिई हाल्छु नी ! सेबाले बनाउने व्यक्ति हुन उदयपुर गाईघाटका ४१ वर्षीय जीवन तामाङ । अहिले बौद्ध तिनचुलीमा बस्दै आएका छन् । उनले ठेला राखेर व्यापार गरेको १४ वर्ष भयो । यतिका समयसम्म एउटै व्यापार गर्नु चानचुने कुरा होईन । उनले […]
जन्मघर गाउँतिर टहलिदै भूपू गोर्खामेजर भिमबहादुर राई (अन्तर्वार्तासहित)
September 15, 2020 LB44LeaveaComment on जन्मघर गाउँतिर टहलिदै भूपू गोर्खामेजर भिमबहादुर राई (अन्तर्वार्तासहित)
लिभु संवाददाता ओखलढुंगा – भूतपूर्व गोर्खामेजर भिमबहादुर राई उमेरले ८१ वर्ष पुग्नु भएको छ । साथमा लौरो छ । छोरा, नाति छन् । दुई दशकदेखि काठमाडौं बसोबास छ । रक्तचाप (ब्लड प्रेसर)ले गर्दा उपचारको निहुँमा काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित घरमा छोरा, बुहारी, नाति नातिनीका साथ रहनु भएको छ । यसपटक (२०७४ साल फागुन १६ गते) का दिन […]
September 15, 2020 LB50LeaveaComment on संस्कृति – किरात राई जातिमा साया (प्रतिष्ठा)को महत्व
भोजपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगलाई हतुवा र आम्चोक नामले चिनिन्छ । यी ठाउँहरूको मुख्य बसोवासी जातिमा किरात राई जाति प्रमुख जाति हो । यहाँका किरात राई जातिले पितृ पूजा गर्दा र साकेन्वाको पूजा गर्दा होस् मानिसको प्रतिष्ठा हेर्ने गरिन्छ । यस कार्यलाई आफ्नो भाषामा साया खाङ्मा भनिन्छ । त्यसैले सायालाई उच्च स्थान दिएका हुन्छन् । यो […]
वाम्बुले राईहरूको समृद्ध संस्कार ‘खाउमो’
September 15, 2020 LB63LeaveaComment on वाम्बुले राईहरूको समृद्ध संस्कार ‘खाउमो’
वाम्बुले संस्कृति : संघीय प्रदेश नं.१ ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्ला दुधकोसी अनि सुनकोसी संगम आसपासका किराती वाम्बुले राई समुदायमा हिउँद महिना मंसिर, पुस, माघ, फागुनमा पितृकार्य गर्दैआएको भेटिन्छन् । विशेषगरी ओखलढुंगाको उँबु, वाक्सा, मानेभन्ज्याङ, केतुके, माधवपुर, रिचुवा, जाक्मा, हिलेपानी, सोक्मटारतिर मंसिरमा नयाँ अदुवा र धान पाकेपछि घरैपिच्छे वाम्ला (न्वागी) गर्दछन् । त्यसैगरी, खोटाङको बाहुनीडाँडा, बेता, […]
September 15, 2020 LB43LeaveaComment on जब मैले मेरा पति नपुंसक भएको थाहा पाएँ …
काठमाडाैं । त्यो मेरो बिहेको रात थियो । पहिलो पटक म एउटा पुरूषसँग नजिक हुँदै थिएँ । मेरा एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग गरेका कुराकानी र मैले हेरेका अश्लील भिडिओहरू सम्झिँदै मेरो दिमागमा सपना र चाहनाका अनेकौँ तस्वीरहरु घुमिरहेका थिए । म हातमा एक गिलास दूध लिइ टाउको निहुराएर कोठामा प्रवेश गरेँ । त्यो पूरै परम्परागत शैलीमा […]
September 15, 2020 LB43LeaveaComment on भेटियो बरफको विशाल चक्र, के छ रहस्य ?
काठमाडाैं । चीनमा यस्तो माहोल बनेको छ, जसलाई देखेर दुनिया हैरान छ । अहिले चीनमा एक रहस्यलाई दिएर मानिसहरु खोतल्न जुटिरहेका छन् । दुनियाँका कैयन प्राचीन रहस्यमध्येको एक चीनको लियाओनिंग प्रान्त भएर बग्ने लियाओ नदीमा फेला परेको छ । उक्त रहस्यमय चिज देख्नका लागि धेरै मानिस झुम्मिएका छन् । सयौँको संख्यामा पर्यटक आउन थालेका छन् […]